Izindaba - I-YALIS Design Door Handle Ngo-2021
Sibheke Phambili Esikhathini Esizayo, i-YALIS Izoqhubekela Phambili Kanye Nawe
Izinxushunxushu ezidalwe yi-COVID-19 zenze izinkampani ukuthi zingabe zisahamba zibheke ekukhanyeni ekugcineni komhubhe, kodwa zaphuthaza enkungu ukuthola indlela yokuphuma.—— yi-European Union Chamber of Commerce in China
Ekuqaleni kuka-2020, kwaqubuka i-COVID-19.Njengamanje, ubhubhane lomhlaba wonke selungenise igagasi lesine lokuqubuka.Ukwethulwa kwemithi yokugoma kuyizindaba ezinhle zokulwa nalolu bhubhane, futhi igagasi lesine lingase libe impi yokugcina.Nokho, umthelela nakanjani uzofinyelela kude.Ngalesi sizathu, i-China isungule iphethini entsha yokuthuthukisa ukujikeleza okukabili.Lokhu kuzosiza i-China kanye nomnotho womhlaba ukuthi zakhe kabusha.
Kungashiwo ukuthi kusukela ngo-2020 kuze kube manje, sihlala sisenkathini yesiphithiphithi esinqumayo, othile ubona i-deterministic futhi othile abone isiphithiphithi.Lokhu kuye kwadala isimo esiyingozi emhlabeni ezimbonini ezihlukahlukene emhlabeni wonke ngo-2020 no-2021. Ezinkampanini, ikusasa lizobukeka njengomugqa oqondile kuphela uma zibheka kude futhi zinembile.
Ngaphansi kwalesi sisekelo, umthamo wokukhiqiza we-YALIS ngo-2020 uzuze ukukhuphuka kwe-counter-trend.
Ngo-2020, i-YALIS door hardware yenze impumelelo ekukhiqizweni okuphelele nasekuthengisweni okuqongelele, okukhuphuke ngo-108% no-107% uma kuqhathaniswa no-2019. Uchungechunge lwesibambo sesibambo sephrofayela ye-MULTIPLICITY uchungechunge, uchungechunge lwe-ENDLESS, uchungechunge lwe-GUARD yesibambo seglasi lohlaka oluncane, kanye Isibambo somnyango kanokusho I-LEATHER ezithuthukiswe ngokuzimela yi-YALIS zonke zithandwa ngamakhasimende futhi ziba ngovelele embonini ye-hardware yomnyango.
Esikhathini esedlule, imakethe yasekhaya yehardware yeminyango ibiphishekela isu elifana nokwethula, ukugaya, ukumunca, kanye nokuqamba kabusha.Leli su liwusizo ngempela ukudlala inzuzo yokususa sekwephuzile ngendlela ethile.Kodwa-ke, njengoba indawo yokubamba iqhubeka nokuncipha, ayikanyakazi.
Ngo-2021, imboni ye-hardware yomnyango kufanele iphule ukuncika, yenze amaphutha emisha, bheka ubaba, ngokushesha kunalokho okucatshangwa yimakethe, ukuze ibambe isigqi semakethe.
Ezimakethe zasekhaya nezamazwe ngamazwe ezingalindelekile, izidingo zabasebenzisi zihlala zingezokuqala.Ngakho-ke, ebhekene nesiteji esisha, iphethini entsha, inselele entsha nethuba elisha, i-YALIS yenze uhlelo olukhulu nombono wesikhathi esizayo.
Engxenyeni yesibili ka-2021, sizoqinisa imizamo yethu yokuhlola izidingo zabasebenzisi abengeziwe ezicini ezihlukahlukene zempilo nezingxenyekazi zeminyango, ukuze sihlale siphambili emakethe, futhi siqinise ngokuphumelelayo ulwazi lwabasebenzisi lwezingxenyekazi zeminyango eminyango.
Qhubeka nokuthatha amasu amabili amakhulu okwenziwa komkhiqizo kwamanye amazwe kanye ne-automation yokukhiqiza njengomugqa oyinhloko wentuthuko.Ngakolunye uhlangothi, yazimisa ngokuqinile njengomhlinzeki wesixazululo se-hardware yomnyango;Ngakolunye uhlangothi, i-YALIS iqhubekile nokwandisa izinga lokuphathwa kwefekthri okuqinile kokukhiqiza.Ngo-2021, umthamo wokukhiqiza uzoqhubeka nokukhula, ukuthunyelwa kuzoshesha, kanye nenkonzo engcono kumakhasimende aphezulu.
Emgwaqweni wokuba umkhiqizi wezingxenyekazi zekhompyutha ezisezingeni lomhlaba, i-YALIS ibilokhu iqhubekela phambili.Ngokuncintisana kwemakethe okushubile kanye nezinguquko ezisheshayo, i-YALIS nayo yenze impendulo esheshayo.Ngenkathi i-YALIS ijwayela izinguquko, iphinde iqinise awayo amandla.Ngokuzayo, u-YALIS uzosilethelani?Isimanga kufanele sibheke phambili.